Inkampani yaseBrithani iClarks ingomunye wabaholi ekukhiqizeni izicathulo ezisezingeni eliphezulu, ezikhululekile neziphezulu. Lo mkhiqizo uthuthukile kusukela ngo-1825. Futhi ngalesi sikhathi babuthana ngaphansi kwekhanda lakhe iningi labaklami abavela kuzo zonke izingxenye zomhlaba. Manje, ukudala iqoqo ngalinye, abalingiswa, abakhiqizi kanye nabaqambi bekampani Clarks balandela ngokucophelela yonke imikhuba yefashini ukuze baqaphele amaphupho abo bonke abesifazane.
Yini okufanele ugqoke izicathulo ze-Clarks ezishintshayo ngokuchofoza?
Lezi zikhumba ze-Clarks zonyaka zidlule konke okulindelwe. Kuyinto enhle kakhulu yezicathulo ezinamathekisthi nezingavamile ukuthi izigidi zamantombazane zibheke phambili ekwindla ukuzembathisa. Babheka kangcono kule tandems elandelayo:
With trousers tight kanye namahembe . Uma ungumnikazi wemilenze ende futhi emincane, izicathulo zikaClarks yilokho okudingayo. Vula amabhulukwe noma ama-jeans kaningi, futhi izicathulo zizodlala ngendlela entsha. Ihembe elixekethile lizofaka ukukhanya nokuthandana nesithombe.
Ngama-tights nama-tunics . Ngale ndlela, ungahamba ukuhlangabezana nabangani noma ukuya enyuvesi, kodwa ukuhamba epaki kuphelele.
Ngegalofu nokugqoka . Isithombe sezintandokazi zamaBrithani amaningi. Ukugqoke ingubo eboshiwe yamahhala isikhathi eside kunama knelo, bese ukhetha amasokisi amadolo amakhulu amadolo, amantombazane enza isitayela esiyingqayizivele nesinobuhle. Ngokuvamile isigqoko sikhethwe kuye ngezwi lesikhwama noma amabhuzu.
Nge-shorts ende kanye nejackethi . Izicathulo zabesifazane zikaClarks ziphelele kokubili ekwindla nasezinkathini ezibandayo. Kodwa lapho izinga lokushisa lomoya lenza abesifazane besimfashini babe njengama-shorts, bajabule ukuwafaka ngezintambo ezinamahlombe. Futhi ijajethi elincane noma lesikhumba ligcwalisa isithombe sekwindla.
Ngamasokisi . Lo mkhuba wemfashini waqala nabaseBrithani, lapho beqala ukugqoka amasokisi ekhanyayo, ayebonakalayo. Namuhla abesifazane bezemfashini emhlabeni jikelele babonisa ngokukhethekile konke amasokisi asetshenziswe ngemifanekiso, imidwebo noma ngokumane ehluke nezicathulo zombala.
Ama-bottles ka-Clarks ahlale ehluke ekunciphiseni nasekuthandeni kwabo uma begqoka. Le nkampani ikhiqiza izicathulo zabachwepheshe bama-classic: abamnyama, beige, abomvu; kanye nesizukulwane esincane: ophuzi, obomvu nolomhlaza okwesibhakabhaka, ngokugqama okukhanyayo, ama-prints nezinkinobho. Ukuze unikeze isithombe sokuphelela, khetha isikhala esikhulu, isikhwama noma isikhwama, okufanisa umbala nezicathulo. Ikhwalithi yezicathulo izokujabulisa isikhathi esingaphezu kwesinye, ngoba inkampani inezimo ezicebile ekudaleni imikhiqizo enokwethenjelwa.
Ama-sneakers agijiwe ane-Led-backlight
Amabhuzu awaziwayo ekhaya
Isiketi esikhwele - ukuthi yini okufanele ugqoke isikwele eside, i-midi nesiketi esincane esifakwe?
Amaflethi e-pink ballet
Ama-Jacket we-Linen Amakhosikazi
Isambatho sempuphu emhlophe yowesifazane
Izingubo zasekhaya - amamodeli angcono kakhulu wezingubo zendlu yemikhiqizo edumile
I-Palazzo ibhulukwe - iyini nokuthi yini okufanele ugqoke?
Indlela yokususa ibala kusuka ensimbi ezembathweni - izindlela ezifakazelwe zendwangu ethandwa kakhulu
Umshado othandekayo ugqoka 2016
Unyaka owodwa kusukela ekuphileni kwidayari evela emasakeni etiyi!
UJohnny Depp uthe: ULily-Rose Depp uzofa esemncane!
Ama-Jeans-amacilongo - ubani ohamba nalokho okufanele agqoke nendlela yokudala izithombe ezifingqiwe?
Uhlangothi olufanele lwekhanda lusizi
I-Trichinosis - izimpawu zomuntu, izimbangela kanye nokwelapha
Indlela yokwenza isimo esihle amawele?
Izingubo zabesifazane namagebhu angaphansi
Garden blueberries - izimfihlo zokukhula ngokuphumelelayo
Izimpawu zamagciwane emzimbeni womuntu
Ukuphathwa kwesikhathi kwabesifazane
Ama-T-Shirts ahamba phambili 2014
Izingubo zesitayela seClub
Yikuphi ukudla okuqukethe i-vitamin B17?
I-Cystitis - i-psychosomatics
Wawuncane kangakanani uVladimir Solovyov?
Utshwala olunobuthi - usizo lokuqala
Imiphi imikhiqizo equkethe isulfure?